Però: Ireo tompon’andraikitra tamin’ny famonoana nandritra ny ady tao Amazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2009 3:27 GMT
Niteraka resabe teo amin'ny tontolon'ny bilaogy tany Pérou ilay zava-nitranga nampihorin-koditra niseho tany Bagua ao anaty alan'i Amazonie any amin'ity firenena ity. Tsikerain'ny mpitoraka bilaogy maro ny filoha Alan Garcia sy ny governemantany satria tsy nanaja ireo fifanarahana sy fifanekena milaza fa alohan'ny hanaovana zavatra ao amin'ny tanin'ireto tompon-tany ireto dia tsy maintsy hanontaniana aloha ny heviny. Izany indrindra no nahatonga ny fihetsiketsehana sy ny fanakana-dàlana ary niteraka fifandonana izay nahitana mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny teran-tany sy poilsy maro maty. Nahazo tsikera koa ny filazam-baovao momba ny fomba firesahany ny zava-niseho sy ny lahatsoratra avoakan'ny mpanao gazety sasany manamaivana ny fahafatesan'ireo teratany.
Notsikerain'i Silvio Rendon ao amin'ny bilaogy Gran Combo ny fanaovan'ny governemanta tsinontsinona ny fifanarahana mikasika ny fifanakalozana malalaka amin'i Etazonia sy ny fifanarahana amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa izay milaza fa tsy maintsy hanontaniana ny hevitr'ireo teratany mialohan'ny hampiasana ny taniny. Mbola tohizany ihany:
Tsy ilaina ny mahafantatra hoe fampiasam-bolan'ny fanjakana izany na avy any ivelany, fa kosa tsy maintsy hajaina ny zon'ireo tompon-tany. Raha manitsakitsaka ny zon'ireo tompon-tany izy, ahoana moa no hahalalana raha mbola hitohy foana izany fanitsakitsahana izany?
Manaiky ny hifampidinika ny governemanta rehefa mandeha ny fihetsiketsehana sy ny fanakana-dàlana. Nanapa-kevitra indray àry izy fa tsy hanao na inona na inona raha mbola mitohy ny fihetsiketsehana. Famadihana fitsipi-dalao tampoka teo! Ankoatr'izany, inona no nataony hifanarahana nandritra izay fotoana izay? Niresaka tamin'ny tompon-tany ve ianareo? Tsia, ny fanovana endrika ny lalàna ihany izy efa nalavin'ireo tompon-tany! Ary koa, hitsivolana maro no efa nambaran'ny mpitondra tenin'ny teran-tany sy ny Comité Constitutionnel du Congrès fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana.
Ao amin'ny bilaoginy Conflitos Sociales en el Peru no mitsikera ny governemanta momba ny andraikiny sy ny tsy fahamalinany amin'izao krizy izao i Erick Garcia. Na dia eo aza ny vaovao ananan'ny governemanta sy ireo avoakan'ny fampahalalam'baovao dia fantatra fa mpihavy maro any an-toerana no manatevin-daharana ireo mpanao fihetsiketsehana:
Ankehitriny, manontany tena aho raha misy hitsivolana mendrika ny fankahalana sy ny fangirifiriana niteraka ireny faty olona ireny. Afaka miresaka famahana olana am-pilaminana amin'izay isika vidin'ireny maty marobe ireny (indrindra taorian'ny fanambaran'ny minisitry ny atitany fa hosamborina sy hatolotra ny fitsarana i Pinzago, mpitarika ny fihetsiketsehana sy ny namany hafa. Indrisy fa hanomboka amin'izay ny fitadiavana ireo mpanao “politika” sy manana “foton-kevitra” tamin'iny famonoana iny; mbola tsy mazava ny toerana horaisin'ny parlemanta mikasika ireo hitsivolana ireo, mazava ho azy fa ny fanafoanana ny ministera no hataon'ireo solombavam-bahoaka). Ny hany zavatra mazava dia hoe tokony ho nifampiresahana ny fototry ny olana, “ny fampandrosoana filamatra an'i Amazonie”, Andriamanitra irery no mahalala hoe rahoviana indray izany vao hatao ady hevitra handraisan'ny rehetra anjara.
Mitsikera tsy am-pihambahambana ny filoha Garcia kosa ilay vahiny Peroviana monina any Espagne, Garcia izay nanambara fa tsy diso ireo mpanao fihetsiketsehana ireo ary tsy afaka hilaza amin'ny vahoaka peroviana miisa 28 tapitrisa tsy hiditra ny faritra misy azy, raha manao izany izy ireo dia hanao fahadalana ary “hihemotra ho olon-dia”. Manoratra mikasika ny filoha Garcia i Jomra:
Tsy vitan'ny hoe mpandainga fotsiny izy, fa olona tsy manana fandeferana sady tsy mahalala ny lalàm-panorenana sy ireo fifanarahana samihafa nosoniavin'i Pérou…Fa ny tena goavana, izay fotony dia: mihevitra ny filoha Garcia fa azo tsinontsinoavina ny voarakitra ao amin'ny andalana 169 ny fifanarahana amin'ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa izay mahakasika ireo teran-tany sy mponina any amin'ny firenena mahaleo tena (lalàna natao ny 1989, nampiharina ny taona 1991 ary nankatoavin'i Pérou ny taona 1994). Miantoka ny rafitra ara-dalàna nomena ireo mponina sy tompon-tany ary ny tantsaha io lalàna io. Ny faharoa dia mitaky fa ny fanapahan-kevitra rehetra mahakasika ny fiainan'ireo tompon-tany ireo dia tsy maintsy hifampidinihana aminy aloha vao tanterahana. Noraisina tsy nisy fifampidinihana ny hitsivolana 1090.
Isaky ny manameloka ireo mpitaika fikambanana ireo ho mpilalao ny mahantra ny filoha Garcia dia izy izay no manao. Amin'izany dia tohanany tsara ny hoe firenena hafa no manao ilay zavatra. Tsy nisalasala akory izy niampanga an'i Vénézuela, nefa nilaza indray izy avy eo fa misy tombontsoan'i Chili (angamba matin'ny fihomehezana ireo mpifanolo-bodirindrina aminay aty atsimo aty noho ny laingany).
Ao amin'ny bilaogy Peru Apartheid no manoratra i Amazalia Fracaso fa malemy ny fiaraha-monina any Pérou ary afaka hamarinina izany satria tokony tsy nisy ireny faty olona ireny. Notsikerainy koa ny fampahalalam-baovao noho ireo andraikitra noraisiny nandritra ity krizy ity:
Ao koa ny tsy firaharahiana, eny hatramin'ny fanamarinana aza nataon'ireo mpaneho hevitra sy mpitoraka bilaogy – izay nilaza fa ny fisian'ireny maty ireny no hamerenana indray ny filaminana ary hanomezana antoka ny fampandrosoana – izay manambara fa mbola lavitry ny fandrosoana ny firenentsika…
Mahamenatra raha ny fampahalalam-baovao tahaka ny Prey21, ny E1 Comercio ary ny RPP no milaza lainga amin'ny mpamaky ary mamily resaka amin'ny hevitry ny vahoaka mikasika ny fihetsiketsehana sosialy, na izany amin'ny fampihenana ny isan'ireo maty avy amin'ny tompon-tany, na izany amin'ny fanafenana ny vaovao na avoaka ihany fa mivalana. Afaka hamarinina koa izany amin'ny vaovao iraisam-pirenena, nanao fanadihadihana mikasika ny fihetsiketsehana ilay mpanao gazetin'ny New York Times, Simon Romero, kanefa nampifangaroany tamin'ny fifandonana tamin'ny Shining Path (lalana mazava) izany izay nilaza fa manohitra ny fampandrosoana ireo teran-tany.
8 ora izayArzantina